I-4 Izifundo ezikhawulezayo | I-Agile Scrum Master Certification «ITS Training
Iziqinisekiso kwiSkram, inkqubo ephambili yokuqhubela phambili kwe-Agile
Ikhosi ye-Agile Scrum Training Course
1. I-Scrum Master eqinisekisiweyo
Ziziphi iingenelo zeSkrumMaster isiqinisekiso?
Imfuneko yeSkramMaster confirmation
Yintoni oyenzayo emva kokuba ufumane isitifiketi sakho se-CSM?
2. I-Agile Project Management-Practice
3. Management Agile Project
4. I-Agile neSkram
Iskram ukulungiselela kunye neZatifikethi ziyanelisa umboniso we-Agile isitatimende ngokukhuthaza umgudu ophezulu ohambelanayo, inzuzo kunye nokufezekiswa phakathi koogxa. Ukuphuhliswa kwehlabathi lonke kumanyano kwaye kubathabatha kwiimveliso eziphezulu.
Amaqumrhu asebenzayo aqinisekisiweyo eSkrumMaster® asebenzisa ngokufanelekileyo iSikram, ukuphucula amathuba okuphumelela ngokubanzi komsebenzi. Ii-CSM ziqonda iimpawu zeSkram, iinkqubo, kunye nezicelo kwaye zinika inqanaba lolwazi kunye nekhono ngokugqithiseleyo kwinqanaba leendwendwe eziqhelekileyo. Ii-CSM zihamba ngeyona ndlela "njengabalingani bokuqasha," kunceda nantoni na ekhoyo kwiSkram ngokubambisana kunye nokuthatha isakhiwo seSkram. Ii-CSMs zikhusela iqela ukusuka ngaphakathi nangaphandle. Ikhutshwe ngakumbi malunga nenxalenye yeSkrumMaster kwaye ubone ityala le-ajenda yeSkrumMaster.
Ngokufumana ubungqina obuqinisekisiweyo beSkritsMaster®:
Ukwandisa ukuvuleka kwakho kwemisebenzi ngokuhlala usebenza kunye nokukhangayo kuzo zonke iinkalo zoshishino ezibandakanya izenzo ze-Agile.
Bonisa umboniso kumashishini kunye nabahlobo bakho abaphumelelayo kwiziko lokufunda.
Thatha ekusungulweni kweSkram kunye nobukhulu beNgxenye yeComputer ScrumMaster kwizinto eziziphethe kakuhle kwiSkram.
Dweba kunye neqela leengcali ze-Scrum ezibonwe zijolise ekutshintsheni okungapheliyo.
Njenge-CSM, uya kuba namandla okugcwalisa inxalenye yeSkramMaster okanye iSkram osebenza naye. Ngokusebenzisa inkqubo yokuqinisekisa, uya kuthatha ukuqonda ngokucacileyo kwenkqubo ye-Scrum, kubandakanywa iziqendu zeqela, ukuzivocavoca kunye neencurios.
Ngokuqinisekiswa kwakho kwe-CSM, nawe uya kufumana ukubhaliswa kwe-2 ngonyaka kunye neSkrum Alliance. Ngale nxaxheba ungabambisana namacandelo omxhasi omakhelwane, imibutho engafanelekanga kwi-intanethi, ukufikelela kwizihlawulelo ezinzulu kwiimicimbi zentlalo, kunye neengxenye ezongezelelweyo njengezinto eziphathekayo. Ngaphezu koko, i-CSM ingasebenzisa uphawu olulodwa oluqingqiweyo ukugqamisa iziqinisekiso zabo.
Ukuze uzuze isatifikethi sakho se-CSM, kufuneka uthathe izifundo ze-CSM kwi-Scrum Trainer (Certified Scrum Trainer) (EST) okanye uVavanyoed Scrum Trainer (EST) kwaye ubonise ukuhamba kwakho ngokusebenzisa ukuhlolwa kwe-CSM yethu.
Ukuhamba kokuqala kwi-CSM yakho uyaziqhelanisa neSkram. Senze i-aundowns yezinto ezinokukunceda ukuba ubone indlela iSikram ishintshe ngayo yonke indawo yomsebenzi.
Ngelo xesha ukuya ebusweni ubuso nobuso, i-day-day (i-16 iyure) ikhosi ye-CSM eyalelwe yi-Scrum Alliance Authorized Trainer. Emva kokugqiba ngokugqibeleleyo ikhosi, kufuneka udlule ukuhlolwa kwe-CSM. Ukufumana amanqaku apasa, kufuneka uphendule ngokuchanekileyo i-24 yemibuzo ye-35. Uya kuba noqeqesho lwe-16 ye-Scrum Education Units.
Emva kokugqithisa ukuhlolwa kwe-CSM, uya kucelwa ukuba uvume iSivumelwano seMvume kwaye uqedele iprofayile yakho yobhaliso lweSkrum Alliance.
Ukuhamba ngokugqithiseleyo i-Agile yindawo ehlala ihlala ixesha elide. Ukuhlanganiswa kwemigangatho nemigangatho kwimisebenzi yonke yomhlaba kuthatha ukuqina, ukuphikelela, kunye nesibambiso sokutshintsha okungapheliyo. Ukongezelela ukuphucula ingqiqo yakho kunye nobuchule boku:
Ukujoyina umxhasi ukudibanisa.
Ukunikezela ngamava akho kwiqela labahlali beSkrum Alliance ngokunikela inqaku kwisiza sethu.
Ukuya kwiintlanganiso zokuBambisana kweSkram.
Ukuhlanganyela kwiqela le-LinkedM ye-CSM.
Ukuphuhlisa ingqiqo yakho ekunqumeni imicu yesiqendu ngokuphumelela iiQuali ezongezelelweyo.
Ukuthabatha amava kunye nekhono lokukhupha ngokucacileyo iSecrum Certified Certified (CSP).
Ukuzhengeza ngokwakho ngokuxelela abanye ngempumelelo yakho kunye nesitifiketi seSSM, ii-logo ze-CSM, kunye neprofayili eguqukayo, echanekileyo kwiStrum Alliance site.
Ukugunyazwa kwe-APMG-International AgilePM® kuthetha ukujongana neemfuno zalabo basebenzayo kwiimeko ezikusempilweni abafuna ukuba bakhawuleze.
Qinisekisa ukulungelelaniswa kunye nenkqubo ebonakalisiweyo yokuthunyelwa kwempahla ekhulayo.
Ulwalathiso lwethu lwe-AgilePM, olwenziwe ngokubambisana ne-Agile Business Consortium, lunikezela phantsi komhlaba kunye nokuphindaphinda inkqubo efezekisa ukuvisisana okuthe ngqo phakathi kwamanqanaba, ukulungelelanisa kunye nokufunyaniswa okufunekayo ekuphatheni kakuhle ukuqhuba, kunye nokuhamba ngokukhawuleza, utshintsho kunye nokuqiniswa okwenziwa yi-agile .
Ukugxininiswa kolawulo lwe-agile kulungelo lokudala amalungiselelo okuxhobisa amaqela achaphazelekayo ukuba aphendule ngempumelelo ekuguqukeni kweemfuneko, ngelixa ebandakanyeka abasebenzi kunye nokuxhobisa umzamo ohlanganyelweyo kunye nokuthengiswa kwempahla.
Yintoni yoLawulo lwe-Agile Project?
"Yiba njalo kunokwenzeka, senza imihla ngemihla siphakame. Siphelile. "
Umzuzu omnye. Ngaphambi kokuba ungatsho ukuba iqela lakho libuhlungu, kubalulekile ukuba ube nokuqonda okufanelekileyo? kunye ???? Iyiphi inxalenye yeendima ze-agile? Ulawulo lwe-Agile lwamashishini yindlela ehloniphekileyo eqhubekileyo evumela abaPhathi beProjekthi ukuba badlulise umsebenzi ophezulu, ophezulu wokuchaneka ???? kwaye zibukeka njengezidalwa zabamhlophe kumalingani abo. Ingaba kunjalo ngendlela ehamba phambili, ebiza kakhulu kunye neyiphutha yokujongana nolawulo lokusebenza, oluye lwahambisa iziphumo ezingqubuzanayo ixesha elide.
Uphuhliso lweenkqubo luguquka rhoqo. Kwinqanaba xa abathengi bancike ekugqibeleni iimfuneko ngaphambi kokuba bavavanye-baqhube imodeli, i-overhead kunye ne-deferrals ende zihlala zikhubaza. Ulawulo lwe-Agile Project li malunga nokuqonda inguqu, nangona emva kokuphuculwa kophuhliso. I ??? malunga nokuhambisa izinto kunye neyona nto ibaluleke kakhulu kwi-business to start with, kwaye ukuba neenkcukacha eziqhubekayo ukujongisa ngokunyanisekileyo iindleko, ixesha kunye neqondo.
Ukuphathwa kweProjekthi ye-Agile kunciphisa umgangatho osemgangathweni osemgangathweni ngokuhlukanisa umjikelezo wangexesha elide lwezakhiwo zokwakha zonke izinto, ukwakha yonke into kwaye emva kokuvavanya ukufumanisa iziphene ezithile. Kunoko-ke, amacandelo asebenzayo okuvelisa umkhiqizo abonakalisiweyo, adalwe kwaye azame ngokufanelekileyo, imijikelezo yeeveki ezimbini ukuya kwezine.
Utshintsho luqala xa ukucinga ukuba iimeko ezikhoyo ziyakwazi ukuguqulwa kutshintshile zibe ngumnqweno wokufezekisa into ngaphandle kokulindelekileyo. Uninzi lwengqondo kunye nokulangazelela kwiplanethi, nangayiphi na imeko, ayiyi kuhamba nayiphi na indawo ngaphandle kwithuba lokuba awukhuseli ngokufanayo amandla okubamba. Uya kufuna ukuba ufunde iimpembelelo ezintsha kunye nokufumana abantu abadala ukuba babe nobuchule kwinkqubo ye-agile, kuquka:
Amakhono amasha akhethekileyo, umz
Imiyalelo yesinyathelo ngesinyathelo ukucinga nokusebenza njengeqela
Imiyalelo yokwenza imisebenzi yokusebenza ngaphakathi kweebhokisi zexesha elifutshane
Ekubeni i-Scrum ye-agile inkqubo iyingqamene ngokwaneleyo malunga nokuqhubela phambili kwenkqubo yenkcubeko, ukulungiselela kunye neendawo zokufundisa okanye ukufundiswa ngokuqhelekileyo kuyadingeka. Oko kubonakala kusebenza ngokusemgangathweni kuninzi kwimibutho yilapho ilungiselelwe ukulungiselela, igxile ekukulungiseni ukuzama iSkram nokuqonda imilinganiselo yeziko layo.
Oku kulungiselelwe ngokuqhelekileyo kubandakanywa ngokusebenza-ngokukhethekileyo ukulungiselela okanye ukuhlonipha, umzekelo, ukuzisa umqhubi wokuphucula uvavanyo olusondeleyo ukuze usebenze ngezandla kunye namaqela kwikhowudi yabo.
I-Software Goat Software inikezela ukulungiselela nokwenza indawo yokubumba ukuze kukuncede wena kunye neqela lakho ubonise iimpawu zokuphucula kwi-Agile kunye neSkram. Ukomeleza ukulungiselela, imibutho kufuneka ivule imivalo (i-wikis, ukudla kwamasemini kunye nokufunda, ukuhweba kwamagqabantshintshi) ukuze amaqela anike ulwazi phakathi komnye.
I-PHP Mailer Librariya Ibulala iwebhusayithi nganye ngomzuzu ongazifundeli eli nqaku